ठूलाे लगानीसहित शिक्षा क्षेत्रमा नम्वर वान बन्दैछाै- सिजी ग्रुपका करण चौधरीसँगकाे अन्तरवार्ता – BikashNews
ठूलाे लगानीसहित शिक्षा क्षेत्रमा नम्वर वान बन्दैछाै- सिजी ग्रुपका करण चौधरीसँगकाे अन्तरवार्ता
२०७५ माघ २० गते १०:३१ विकासन्युज
करणकुमार चौधरी, कार्यकारी निर्देशक–चौधरी ग्रुप
व्यवसायिक घरानाको परिवारमा हुर्केका करणकुमार चौधरीको व्यवसायिक यात्रा एक दशक लामो भईसकेको छ । ११ वर्षअघि व्यवसायमा छिरेको चौधरी अहिले सिजी होल्डिङ अन्तरगतको सिजी मोटोकर्प, सिजी मनि ट्रान्सफर, नेपाल ल्युव आयल लगायत कम्पनीहरुको नेतृत्व गरिरहेका छन् । नाडा अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपालका कार्यकारिणी सदस्य समेत रहेका चौधरीसँग अटोमोवाईल्स बजार, उनको व्यवसायिक योजना र आकांक्षाबारे विकासन्युजका लागि प्रधानसम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस यसपटक ।
पछिल्लो समय अटो मोवाइल क्षेत्रमा मन्दी आएको हो ?
यसबारेमा मेरो सोच्ने तरिका अलि फरक छ । अरुहरुले त अटो मोवाइल क्षेत्रमा मन्दी आएको छ भन्छन् तर म यसो भन्दिन । किनकी मैले यसलाई वे अफ बिजनेशको रुपमा लिइसकेँ । १ वर्ष हुन्छ म अचम्मित हुन्छु । २ वर्ष हुन्छ, अनि यस्तो लाग्छ यो ट्रेण्ड बनिरहेको हो कि ? यो त तेश्रो वर्ष हो । बिजनेशमा यस्तो हुन्छ कि कहिले मन्दी हुन्छ, कहिले अलि चल्छ । नेपालको आर्थिक वर्ष साउनमा शुरु हुन्छ । त्यसपछि दशैं आइहाल्छ । अटो मोवाइल क्षेत्रमा त झन् भदौदेखि नै दशैँले छोइसकेको हुन्छ । नाडा अटो शोपछि नै दशैँ शुरु भइसक्छ । दशैँ त्यहाँबाट शुरु भएतापनि त्यो बेलाको बुकिङलाई गाडी दिंदादिंदा मंसिर सकिन्छ । त्यसपछि पुस महिना आउँछ । पुस महिना यस्तो महिना हो, हाम्रो रितिरिवाज, लाइफस्टाइलका लागि राम्रो महिना होइन । यो महिनामा मानिसहरुले गाडी किन्न खोज्दैनन् । यसमध्ये कतिपयले भने जरुरी परेमा किन्छन् । मंसिर, पुस, माघ, फागुन स्वभाविक रुपमा मन्दी आउने समय हो । चैत महिनामा अलि बढ्छ, नयाँ वर्षमा नयाँ गाडी चढ्न खोज्छन् ।
अहिलेको अवस्थालाई मन्दी नमान्ने हो भने अटो मोवाइल क्षेत्रको मार्केन्ट ग्रोथ कस्तो छ ?
ओभरअल मार्केट ग्रोथ छ । हामीले ३ वर्षमा पहिलो वर्ष १२/१३ हजार गाडी बेच्थ्यौ भने त्यसपछि १६ हजार पुग्या छ । यो वर्ष मेरो अनुमानमा १९ हजार पुग्नु पर्ने हो कार/जीप बिक्री ।
सुजुकीले इयर अन इयर बिक्री बढिरहेको छ । ओभर अल सेग्मेन्टमा त ग्रो गर्ने नै भइहाल्यो । हामीले सेग्मेन्ट टार्गेट गरेर पनि ग्रो गराइरहेका छौं । पहिलो सुजुकी कम मूल्यमा बढी बिक्न गाडी हो भनिन्थ्यो । आज स्वीफ्टहरुको सेग्मेन्टमा पनि राम्रो छ । युटिलिटी सवारी साधनमा ब्रेजाको बिक्री दोस्रो स्थानमा छ । हामी क्रेटाभन्दा केही कम छौं तर फोर्डभन्दा माथि छौं । ओभरअल ट्रेण्डमा सुजुकीको बिक्री बढीरहेको छ । हामीले कार/जीप सेगमेन्टमा ३६ प्रतिशत मार्केट होल्ड गरेका छौं ।
लोनको कुरा गर्दा सुजुकी नै ८५ प्रतिशत फाइनान्स गरेर नै बिक्री गरेका हुन्छन् । मानिसहरु नगदमा भन्दापनि फाइनान्स गरेर गाडी किन्न रुचाउँछन् । बजारमा जति रोइ कराई गरे पनि अटोमोबाइल क्षेत्रले राम्रै गरिरहेको छ ।
तपाईँले भन्नुभयो ८५ प्रतिशत सवारी अटो लोनमा खरिद बिक्री भइरहेको छ । बैंकको ब्याज दरपनि १४/१५ प्रतिशत छ । लगानीयोग्य पुँजीको कमी देखिन्छ बैंममा । यसले असर गरेको छैन ?
यो एउटा मनोबैज्ञानिक असर मात्र हो । अरु केही होइन । पहिले ३५ प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नु पथ्र्यो । अहिले १५ प्रतिशत बढी तिर्नु पर्ने त हो । ८/९ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशत पुगेको त हो अटो लोन । त्यसकारण बैंक ब्याज महङ्गो भएर गाडी बिक्री घट्यो भन्नु उपयुक्त हुन्न ।
अहिले देशको अवस्था पनि नाजुक छ । फरेन करेन्सी जुन रिजर्भ छ, त्यो डेन्जर जोनमा छ । फरेन्स करेन्सी बाहिर पठाउने अटो मोवाइल क्षेत्र टप टेनमा होला तर टप थ्रीमा छैन । अटोमोवाईल क्षेत्रले भन्दा विदेश गुम्ने जाने नेपालीले विदेश लैजाने डलर बढी छ । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिने कि ?
उच्चदरको करले होला, व्यवसायिक लागत उच्च भएर होला, नेपालीहरुको लागि निजी सवारी निकै महँगो भएको छ । कसरी सवारीलाई सस्तोमा र आम मानिसको पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ ?
मेरो यसमा के सोचाई छ भने सस्तो गाडी छ भन्दैमा मान्छेले किन्दैन । हामी कहाँ सस्तोमा अल्टो छ १४ लाख ४९ हजारमा किन्न सकिन्छ । तर, यसको बिक्री घट्दै आएको छ । मानिसहरुको सोचाई परिवर्तन भएको देखिन्छ । सस्तो भन्दा पनि राम्रो गाडी चढौँ न भन्ने सोचाई विकास हुँदै आएको छ । पहिलो पटक गाडी किन्नेहरु पनि इन्ट्री लेवलको कार किनि रहेका छैनन् । १४ लाखको अल्टो छोडेर २४ लाखको सेलेरो किन्न थाले । ऋणै गरेर भए पनि महँगो गाडी चड्ने क्लास बढेको छ । ल्याण्ड रोभर, जीप जस्ता महँगा गाडी सडकमा प्रशस्त देखिन थालिसके । समाज देखावटी रुपमा गइसक्यो । नेपालीको इच्छा आकांक्षा निकै बढ्यो । पहिला नेपाली घुम्न जाँउ न भन्दा भारत आउँथ्यो–आग्रा, जयपुर । दिन राम्रो भएको रहेछ भने गोहा गुम्न जाउँ भनिन्थ्यो । तर अहिले नेपालीहरु अमेरिका, अष्ट्रलेलिया, स्वीजरल्याण्ड, अफ्रिकामा जंगल सफारी जाउँ भन्छन् । घुम्न जाने देशमा भारतको नाम नै पर्न छोड्यो नेपालीका लागि । घरमा केटाकेटीले पनि स्मार्ट फोन माग्छन्, टचवाला । जहाँ फेसबुक, ट्वीटर, यूट्युव, ह्वाटएप सबै चल्नुपर्छ ।
समाजमा देखावटी पन बढेको हो कि नेपालीहरुको आयस्रोत नै बढ्या हो ?
आयश्रोत बढेको भन्ने चिजको तथ्याङ्क छैन । देखावटी नै हो । बल्लबल्ल बैंकको कति प्रोसेस गरेर कसैले गाडी किने भने उसले त्यो गाडी पाल्न धौ धौ परेको देखिन्छ, यसरी हेर्दा नेपालीको आयश्रोत बढ्यो, त्यही भएर महङ्गो गाडी चढ्न थाले भन्न सकिदैन ।
अलि फरक प्रशंगमा कुराकनी गरौं, तपाईँले कुन–कुन बिजनेश लिड गरिरहनु भएको छ अहिले ?
अटोमोविल छ । नेपाल ल्यूब आयल र सिजी मनी लिड गरिरहेको छु । चौधरी ग्रुपका अरु कम्पनीमा म एडभाइजर रोलमा हुन्छु ।
नेपाल ल्यूब आयलको अवस्था कस्तो छ ?
राम्रो छ । यस वर्ष हामीले सेयरधनीलाई ४० प्रतिशत लाभांश दियौं । सरकारले निजीकरण गरेका कम्पनी मध्ये सबैभन्दा राम्रो कम्पनीमा पर्छ नेपाल ल्युब ।
तर यो कम्पनीको सेयर कारोबार किन हुँदैन ?
मैले हाम्रो एजिएममा पनि यो कुरा उठाएको थिएँ । हाम्रो शेयर पनि किनबेच गरौँ न । हाम्रो शेयरको भ्यालु बढ्ने हो । तर, अहिले नेपाल ल्यूबको शेयर भ्यालु २०० सय छ तर मार्केन्टमा यस्तो भ्याबरेन्ट ल्याइरहेको कम्पनीको शेयर भ्यालु त बढ्नु पर्ने हो नि । कसैले बेच्नै मान्दैन, आज ३/३ पुस्तासम्म शेयर होल्ड गरेर राखेको छ । त्यसलाई के भन्ने ? त्यस्तो मोह छ, आजसम्म ट्रेड नै भएको छैन । नेप्से अपडेट छ, डिम्याटमा अपडेड छौं । नेपाल ल्यूब आयलमा ८०० शेयरधनी छन् तर यसको शेयर कारोबार नै हुँदैन । आज शेयर किन्न जानुस्, कसैले बेच्दैन ।
४० प्रतिशत रिटर्न इन्भेष्टभेन्ट बैंकको सेयर मूल्य ६०० भन्दा माथि छ । तर नेपाल ल्युवको सेयर मूल्य किन २०० मात्र ?
हो । यो कम्पनी निकै राम्रो छ । यसको सेयर मूल्य १००० भन्दा माथि हुनु पर्ने हो । आफूले रन गरेको कम्पनीको शेयर मूल्य बढोस् भन्ने त भइहाल्छ नि । खै किन यस्तो भइरहेको छ, मलाई नै थाहा छैन ।
सिजी मनी ट्रान्सफरको के छ बिजनेश ?
यो बिजनेशमा म आउँदा त्यस्तो ग्रोथ हेरेर आएको हैन । रेमिटेन्स बिजनेश एउटा अनौठो बिजनेश छ । आज जुन हिसाबको प्रतिष्पर्धा छ, नेपालमा म रेमिटेन्स ल्याइदिन्छु, उताबाट यता, यताबाट उता पैसा ल्याइदिन्छु भन्दैमा पैसा कमाउन असंभव छ । किनभने अरु कम्पनीहरुले धेरै चिज अफर गरिरहेका छन् । हुन सक्छ हामीले पनि भविश्यमा केही न केही अफर ल्याउँदै छौँ । त्यो ल्याउँदा यो बिजनेशको स्केल त्यही अनुसार बढ्ने हो । यसलाई कसरी बढाउने भन्ने बारेमा सोचिरहेका छौँ ।
तपाईँ ११ वर्षदेखि बिजनेशमा हुनुहुन्छ । के रहेछ बिजनेश ?
मेरो बिचारमा बिजनेश मेन्टल पीस अर्थात दिमागको आराम, शान्ति नै रहेछ ।
विजनेशमा साँच्चै शान्ति छ, म बनावटी कुरा गरिरहेको छैन ?
तपाईँले सोध्नु पनि जायज छ । कहिले काँही केही अप्ठ्यारो, तनाव होला, समग्रमा भन्दा शान्ति नै हुन्छ । म यो भूमिमा आएको विजनेश गर्नका लागि हो । यो भूमिमा केही गरेर देखाउनु पर्नेछ । अरु भन्दापनि यो देशको नाम माथि बढाउनु पर्नेछ । आज मेरो देश सिंगापुर जस्तो भएको भए मैले कति गर्थे होला ?
बिजनेशको प्लेफर्मबाट नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा चिनाउन सकिन्छ ?
मैले मेरो देशलाई चिनाउनका लागि पहिलो कुरा देशमा म चिनिनु पर्छ । देशले मलाई चिन्नु पर्छ पहिला । देशले मलाई चिन्ने कसरी त ? यो देशले बनाएको मान्छेले के गर्न सक्दो रहेछ ? मेरो एउटा लक्ष्य रहेको छ, म जहाँकहीँ पनि जाँदा मान्छेले फर्केर हेरोस् । चिनोस्÷नचिनोस्, मान्छेको नाम चिन्नु स्वभाविक छैन, एकचोटी को आएछ भन्ने चाँही होस् । नेपालको फिल्डमा त मलाई कत्तिले चिन्नु हुन्छ होला, कत्तिले चिन्नु हुन्न, बाहिरपनि त्यो फिलिङ गराउनु छ । आज व्यवसाय भन्ने, उद्योग भन्ने चिज एकदम पावरफुल चिज हो । किनभने यो चिजले आज संसारमा मान्छेले ब्राण्डको रुपमा लिन्छ । आज सुजुकी गाडी भन्ने त सबैले चिन्छिन् नि । मैले भविश्यमा एउटा ब्राण्ड निकालेर संसारमा पुर्याउनले लक्ष्य लिएको छु । त्यो ब्राण्ड विश्वमा पुग्यो भने देशको नाम माथि आउँछ ।
आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउनका लागि आफ्नो प्रोडक्ट/इनोभेशन चाहियो नि ?
म निराश छैन, म एउटा लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेको छु । म यो कुरामा विश्वास राख्छु कि म चुप लागेर बसेँ भने फल पाउछुँ भन्ने छैन । मैले कर्म गर्नु पर्छ तब फल पाउँछु । मलाई केही लिएर जानु छैन, मलाई त्यस्तो केही गर्नु छैन । म सधैँ खुशी छु । मैले जे गरेपनि नम्बर वान हुने मेरो लक्ष्य हो ।
अब लगानी विस्तार कहाँ कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ ?
हाम्रो देशमा सबैभन्दा खाँचो बुद्धिको छ, शिक्षाको खाँचो छ । शिक्षा हाम्रा लागि एकदमै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । आउँदो दिनमा बृहत रुपमा शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी गर्नेछौँ । त्यसको लागि के गर्ने भन्ने सोचिरहेका छौँ । हाम्रो काठमाडौँ बल्र्ड स्कूल खुलेको छ । लिंकन स्कूल, प्रिमियर कलेज, एक्सल कलेज, सिजी आयाममा लगानी गरेका छौं । त्यसबाट शिक्षाको गुणस्तर बढाएका छौँ । शिक्षामा हामी नम्बर वान बनेर आउँछौं । अर्को हाम्रो ध्यान पर्यटन क्षेत्रमा छ । हाम्रो देशलाई चिनाउन पनि पर्यटन क्षेत्रको विकास र त्यसमा लगानी गर्नु जरुरी छ । होटल अर्को क्षेत्र छ, त्यसले ठूलो कट्रिव्यूट गर्ने वाला छ । हामी पावरमा जाने वाला छौँ । जति कठिनाई भएपनि पावरमा जानु पर्ने जरुरी छ अहिले । देशलाई इलेक्ट्रिसिटी जरुरी छ । उत्पानमुलक उद्योगमा पनि ठूलो लगानी गर्ने सोचमा छौं ।
तपाईँका बुबाहरु ३ दाजुभाई, सबैजना बिजनेश मै हुनुहुन्छ र सिजी भन्ने बित्तिकै बिनोद चौधरीको भन्ने बुझ्छन् । यसले गर्दा तपार्इँहरुलाई ब्राण्ड डोमिनेशको फिल हुन्छ कि हुँदैन ?
मैले जहिले पनि एउटा कुरा सोच्ने गरेको छु । परिवारलाई कहिले पनि बिजनेशको रुपमा लिइन् । बिनोद बुबाले गर्नु भएको, बसन्त बुबाले गर्नु भएको वा मैले गरेको सबै चौधरी ग्रुप नै हो । मैले कसैलाई म चौधरी ग्रुपको भन्दा तपाईँ बिनोद चौधरीको रिलेटिभ भन्दा किन दुःख मान्नु ? हो, मेरो ठूलो बुबा भन्छु । यो त झन् सकारात्मक कुरा हो । उहाँले मलाई चिनाउन सहयोग गरिरहनु भएको छ ।
नाम एउटै भएता पनि हाम्रो बिजनेश सम्पूर्ण रुपमा फरक छ । आज निर्वाण दाईहरुले के गर्नु हुन्छ मलाई सरोकार छैन, मैले के गर्छु उहाँलाई सरोकार छैन । तर हामीबीच अत्यान्तै राम्रो सम्बन्ध छ । हामी एक अर्कोसँग प्रतिष्पर्धा गर्दैनौँ । हामी एकअर्कामा स्वायत्त छौँ, तर चौधरी ग्रुपमा सबै एकताबद्ध छौँ ।
फोर्ड एन्डेभरको नयाँ माेडल नेपाली बजारमा, मूल्य एक करोड ४९ लाख रुपैयाँ
कक्षा ११ को बोर्ड परीक्षा नहुने, आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा प्रमाणपत्र
अब एक क्लिकमै गाडीको बुकिङ्ग गर्न सकिने, लक्ष्मी हुण्डाईले ल्यायो नयाँ सेवा
विद्यालयमा राखिएका क्वारेन्टाइनको विकल्प खोज्दै प्रशासन